IMicrosoft iyaqhubeka nokudiliza abasebenzi bayo, manje sekuyithuba labasebenzi beSkype | Izindaba zamagajethi
UJoaquin Garcia | | Izaziso
Njengoba kubikiwe Izikhathi zezezimali, IMicrosoft izoqala inqubo yokudilizwa emsebenzini ngemuva kwalokho ukuvala ihhovisi laseLondon elinesigaba seSkype lapho. Le nqubo ifaka phakathi abantu abangaphezu kwama-400Isibalo esiphakeme, yize singaphakeme njengokulungiswa kabusha kwenkampani okwakusho ukuchitha cishe bonke abasebenzi ebesibazuze ngabakwaNokia.
Kulokhu, Ukuvalwa kwehhovisi laseLondon akusho ukuthi ulahla iSkype, IMicrosoft ikuqinisekisile, yize ixwayisa ngokuthi isiqalile inqubo yokuhlanganisa imisebenzi yonjiniyela enayo njengamanje ukunciphisa abasebenzi.
IMicrosoft izoqhubeka namanye amahhovisi nezikhundla zeSkype kodwa lawo aseLondon ngeke
Yize lolu kunguhlobo olusemthethweni, imininingwane eminingi iqoqiwe kulabo ababengabasebenzi benkampani abakade bexhumana ne-Skype futhi bexwayisa ukuthi selokhu kuthengiwe, iMicrosoft ibincipha kancane esikhundleni sabasebenzi bakudala be-Skype nabasebenza iMicrosoft, into engayeki ukuba yinto ejwayelekile kulezi zimo yize zombili izinhlangothi zihlala zisho okuhlukile. Kancane kancane iMicrosoft izokhipha hhayi kuphela abasebenzi bokuqala beSkype kodwa nezinye izinkampani ebizithenga eminyakeni yamuva.
Kunoma ikuphi, ngicabanga ngokwami IMicrosoft iyaqhubeka necebo layo lokwehlisa abasebenzi, ngamanye amazwi, ukunciphisa abasebenzi bayo ukuze baphumelele ngokwengeziwe lapho bebhekene nezinguquko ezizayo ezizayo. Lezi zinhlelo azifani nezeMicrosoft kepha ezinye izinkampani ezinkulu zenza okufanayo ngezifanekiso zazo ezifana ne-Intel. Kunoma ikuphi, ikusasa lehhovisi laseSkype laseLondon liyavalwa futhi ngalo ikusasa labasebenzi kule nkampani. Kepha Ngabe kuzoba ukudilizwa kokugcina kwenkampani kulo nyaka? Ngabe kuzoba khona ezinye izimanga ezimbi eMicrosoft? Ingabe lokhu kuzokuthinta ukusebenza kwe-Skype?
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Izaziso » IMicrosoft iqhubeka nokudiliza abasebenzi bayo, manje sekuyithuba labasebenzi beSkype
Futhi ngeke iBrexit ihlangane ngalutho nayo? Kwenzeka ngengozi ukuthi kuphela amahhovisi aseLondon avale ...
I-Metal Gear Iyasinda, eyokuqala kusukela enkathini ye-post-Kojima ephakamise imiphetho emibi